Khadiija: "Shaqo la´aantu waxeey horseedaa mukhaadaraad iibin" - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Khadiija: "Shaqo la´aantu waxeey horseedaa mukhaadaraad iibin"
La daabacay torsdag 27 april kl 08.00
Labadii sannadood ee ugu dambeeyay
Khadiija Faarax. sawir: Muuna Ismaaciil/Sveriges Radio
Labadii sannadood ee ugu dambeeyay ayey xaafadaha Rinkeby-Kista yareeysay tirada shaqooyinka kuleeylaha ee dhalinyarada loogu talo galay waxaa af-iswiidhishka lagu yidhaahdo sommarjobb.
Xaaji Faarax ayaa ka mid ah waalidiinta soomaalida ah ee dhaleecaynaya xaafadaha. Sababta ayaa ah rabshadaha ka taagan xaafadahan oo uu aaminsanyahay in ay raad ku leeyahiin in aaney dhalinyaradu haysanin wax ay sameeyaan wakhtiga firaaqada ah, khaasatan marka fasaxa kuleeylaha lagu jiro.
Xaafad kasta oo ka mid ah degmada Stockholm ayaa sannad walba la siiyaa lacag u gaar ah shaqooyinka kuleeylaha ee dhalinyaradda. In kasta oo ay xaafadaha Rinkeby-Kista ka mid yihiin kuwa la siiyo lacago ka badan xaafadaha kale ayey haddana yareeyeen shaqooyinkan labadii sannadood ee ugu dambeeyay. Xaaji Faarax iyo mar kale.
Khadija Faarax ayaa ka mid ah dhallinyarada dalbatay shaqooyinka kuleeylaha. Hasayeeshe ay sheegtay in aaney filayn in ay heli doonto.
Khadiija Faarax ayaa la wadaagta fikirka oranaya in dhallinyaradu aanay haysan howl ay qabtaan wakhtiga firaaqada islamarkaana khatar ugu jiraan in ay bilaabaan iibinta mukhaadaraadka sidii ay lacag ugu heli lahaayeen.